Pfuti nemaruva |
Dzosa kubwinya mazuva pamwe Pfuti N Roses paIndaneti Mobile slots mutambo
Kune mapoka mashomanana zvikuru kuti chaizvoizvo angamira kuna iconic uye kunozivikanwa Pfuti nemaruva asi kunyange ipapo boka ane pamupendero wayo. Kungave headbanging weheavy metal kana Classic dombo tunes, boka chokwadi akamuka anorova dzavo dzorudyi kuvaraidza zvizvarwa zvakaoma padombo mafeni. Kunyange zvazvo boka rave emauto akadzingwa mabasa dombo ravo nziyo dzokurumbidza vachiri kuramba isu kuvaraidza.
The bhendi yave akabhadhara kuremekedza munzira dzakawanda. Ngazvive aine nyore Mug kana t-shirt, ari Logo pamusoro payo inoti zviri anorichengeta kuti bhendi unoisa boka vega. NetEnt Studios chokwadi akatora uchitamba mutambo wacho nyika romuromo kana akadaro slots mutambo kuna bhendi. The kubva bhokisi pfungwa Zvisinei akabhadhara kure pamwe boka mafeni uye slots zvechokwadi mafeni zvose kudirana achipinda dzokubhejera vaedze ruoko rwavo pamusoro mutambo kuna ngano.
Nostalgic zviratidzo uye Soundtracks
Rwakadini nesimba kuti NetEnt chikwata kuisa kuvaka ichi slots machine ndewe chaiyo panotaurwa. Sezvo mutambo anoshandisa Makwara yepakutanga vari copyrighted uye vaiva pedyo bhendi, NetEnt aifanira kuwana boka racho mvumo kuzvishandisa yavo mutambo. Asi boka akapa ichi uyewo mvumo yokushandisa chinhu vakafunga zvakakodzera uye migumisiro vanopfuura pachena kubva mutambo.
With boka raMwari Logo uye kunozivikanwa nyeredzi kufanana Axl Rose uye Chengetedza pamusoro Gwenzi uye vamwe veboka kuti vakawanda pakarova nziyo vanotamba kumashure. Game slots inogona kuwana mafeni zvose chehondo nostalgic sezvo Pfuti nemaruva mutambo slots ndomumwe zvakanakisisa Tributes kunzi unogona rwakabhadharwa kuna bhendi.
The Guns n Roses mutambo slots anewo zvimwe zvinoshamisa zviri pariri. Mutambo une remake, Anoparadzira uye multipliers kuti mbambo dzako kuti vakadzoka guru. Nepo remake mabasa sezvo zvose akawanda remake vanoita, ari Anoparadzira kukupai vakasununguka Tunoruka uye zvakawanda. The Anoparadzira vari mutambo kwete chete mubayiro kwamuri vakasununguka Tunoruka asi kukupawo multiplier bhonasi zvichienderana pamusoro waguma uwandu uparadzire zviratidzo.
The Pfuti nemaruva mutambo slots kunopfuura wakakodzera mutero kuna bhendi. Vamwe kwazvo Graphics uye Soundtracks anogona kuwana muchifunga pamusoro bhendi uye hunogutsa zvinhu zvinogona kudhonza iwe kodzero kudzokera chokwadi, game slots chaizvo imwe youpfu kubva NetEnt.